Ngwunye Minesweep. Etu esi egwu Minesweep. Emulator.online
Ngwunye Minesweep. Emepụtara na iri na itoolu na iri asatọ na itoolu, Minefield bịara Windows iri atọ na otu naanị na iri itoolu na abụọ ma ka na-eju ọtụtụ ndị egwuregwu taa. Njikọ ya agbanweela ọtụtụ afọ, mana ndị ọrụ egwuregwu ka na-emebibeghị. Echere m na nke a bụ kpọmkwem ihe ị nwere mmasị na: ebe ọ bụ na ahụmịhe gị gara aga enyebeghị gị nsonaazụ dị mma, ị ga-achọ ịghọta n'ụzọ zuru ezu otu esi egwu Minesweeper.
Ọ bụ otu n’ime egwuregwu ndị ahụ mmadụ ọbụlagodi, ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ ha. Ọ gụnyere na ihe niile nsụgharị nke Windows ruo asatọ, mgbe Microsoft kpebiri ihichapụ ya nakwa Owu na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ etinyegoro na sistemụ arụmọrụ gị kemgbe ọtụtụ afọ. Fọdụ na-akpọkwa ya ebe a na-egwu egwuN'eziokwu, nke a bụ mgbanwe nke egwuregwu (nke kwesịrị ekwesị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị) nke ewepụtara na Windows XNUMX nke gosipụtara otu ihe ahụ.
N'ezie, na nkuzi nke taa, aga m akọwa otu esi enweta na otu esi egwu Minefield site na ikwu maka ụdị nke Minefield kachasị ọhụrụ n'efu na ụlọ ahịa Windows XNUMX, nke nwekwara mmetụ aka. na ị nwere ike jikọọ na Xbox Live ịkọrọ gị ọganihu. Gbalịa ya, m na-agwa gị na ị gaghị akwa ụta! Ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju, agaghị m akwụsị igwa gị nhọrọ ndị ọzọ dị mma maka PC, ama na mbadamba. Obi ụtọ na-agụ na karịa ihe niile, nwee ọ itụ!
Ngwurugwu | Minesweeper Online
Na ụdị egwuregwu kachasị ọhụrụ nke Microsoft wepụtara enwere ọnọdụ 2 dị: nke ahụ kpochapụwo, nke ji ikwesị ntụkwasị obi na-ebipụta peculiarities nke Prato fiorito, na nke aventura nke, n'aka nke ọzọ, na-eweta ọdịdị ọhụrụ. Ka anyị malite na nke mbụ, n'ihi ya ị gụrụ ntuziaka a.
En Minedị ọnọdụ ebe ọdịnala enwere okporo igbe ndị ekpuchiri ekpuchi, nke na-anọchi anya mpaghara ebe a na-egwupụta ihe nzuzo: iji merie, ị ga-ehichapụ oghere efu ọ bụla na oge kachasị dị nso. Na nsụgharị a, kama ị na-egwupụta ihe, ị ga-ahụ ladybugs, mana ọrụ ahụ agbanweghị. Ewezuga ihichapu ebe ndị ahụ site na ịpị (ma ọ bụ pịpị), ị nwere ike kaa ndị nke ị chere na-ezo ezo nke ala ma gbochie ha, ka ị wee ghara igbatu ha.
Can nwere ike mado otu ọkọlọtọ uhie n'ime igbe ndị a na pịa nri nke òké ma ọ bụ aka dị ogologo: ịmeghachi ihe a, kama ọkọlọtọ, a akara edo edo nke ga "mepee" taịl nile ahọrọ ka ị hapụ ha. Iji merie, ị ga-ewepụ square ọ bụla na-enweghị mines, na-enweghị ịgbasu otu m.
Enwere usoro 3 dị mgbagwoju anya ịhọrọ site na: mmalite, n'etiti y merela agadi. Chọ ịmata ihe dị iche na ha bụ ọnụ ọgụgụ ebe na mines na grid: itoolu × itoolu n'ámá na mines iri na nke mbụ, iri na isii × iri na isii na iri anọ na nke abụọ, na iri atọ × iri na isii na iri itoolu na itoolu na nke atọ. Nwekwara ike ịhọrọ igwu egwu larịị omenala grids, ebe ịhọrọ igbe ole a ga-enwe na altura, obosara na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-egwuputa ihe ma ọ bụ Coccinelle. Eightdị nke mbụ asatọ na asatọ na-enweghị ebe obibi anaghị akwụ ụgwọ.
Imirikiti igbe n'efu anaghị efu, mana ụfọdụ nwere nọmba 1 ka 6: ha bụ ihe ngosi bara uru, ebe ha na-egosi ọnụọgụ ole e nwere na mpaghara ahụ. Ọ ka mma ka ihichapụ igbe ndị na-esote ndị na-enweghị nọmba n'ime ma kaa dị ka "ihe egwu" ndị na-esote ise ma ọ bụ isii. Na mgbakwunye na nke a, ị ga-atụkwasị obi na akụ gị, ebe ọ bụ na ọ nweghị ndụmọdụ ma ọ bụ usoro ọhụụ pụrụ iche iji merie Minefield. Ọ bụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu dị oke mma!
Ọnọdụ aventura Ọ bụ ihe ọhụụ na-atọ ụtọ ma enwere ike ịhụ ya dị ka egwuregwu dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ na-ejigide ụfọdụ ọdịiche nke minesweeper ọdịnala. N'ebe a, onye na-egwuputa ihe na-arụ ọrụ nke ịgafe usoro nke mgbagwoju anya (nke ọ bụla na-anọchi anya ọkwa), na-egwupụta igbe ndị ahụ n'ụzọ. Kama nke mines, ọnyà ndị ahụ zoro ezo: ị malitere na ndụ 3 ma nwee ike iritekwu site na ịchịkọta obi. Mkpụrụ ego ahụ na-abawanye akara.
The njem mode bụ obere "na-akụda mmụọ" karịa omenala otu, n'ihi na eziokwu na ọ bụrụ na ị na-ahụ ọnyà na ị ka nwere 2 ọzọ ohere imeju larịị. Ọnụnọ nke mkpụrụ ego na ihe ndị ọzọ na-eme mkpokọta iji meghee ọnụ ụzọ ahụ (na-aga n'ihu naaventura) na-eme ka ahụmịhe egwuregwu ahụ kwenye karịa: igbe ndị a ga-emeghe mgbe niile nwere ike ịnwe ọnụọgụ njirimara nke ọnyà ndị dị nso na igwe ọrụ ahụ bụ otu ihe ahụ akọwapụtara na mbụ.
Na mgbakwunye na mkpụrụ ego ahụ, onye na-egwuputa ihe nwere ike ịnakọta ọla edo ọla edo y ogwe aka gbue ndị iro ma bibie ọnyà n'ụzọ gị: nke ọ bụla n'ime omume ndị a na-enyere aka ịbawanye akara nke egwuregwu ahụ. Enweghị ọkọlọtọ ma ọ bụ akara ajụjụ, mana enwere akara uhie na ọcha na a akara ngosi, nke nwere otu nzube ma jiri aka nri pịa ma ọ bụ aka dị ogologo.
Ihe ọhụrụ ahụ akwụsịghị ebe a, dịka ugbu a Minefield na-enyekwa ụfọdụ nsogbu kwa ụbọchị Ha na-adabere na ọdịnala zuru oke ma kwe ka ị rịgoro onye isi ọ bụla kwa ọnwa maka ego enwere ike iji ya na egwuregwu ahụ. Enwere ike ịnweta ihe ịma aka ndị a kwa ụbọchị site na isi egwuregwu nke egwuregwu ahụ ma a na-atụ aro ka e mejupụta omume dị iche iche: iji bụrụ ihe atụ, n'otu nsogbu ị nwere ike ịkọ akara mines iri na ọkọlọtọ (na-enweghị ịhapụ igbe ọ bụla) na ọzọ iji kwụpụ na mines.
Ihe ịma aka ndị ahụ na-enye ọta 4 nke ọla, ọlaọcha, ọla edo na diamond, dabere na ọganihu kwa ọnwa. Ọdịdị nke mgbagwoju anya gosipụtara nke ụdị kpochapụwo - ị nwere ike imeri ihe ịma aka dị ka onye mbido, n'etiti ma ọ bụ ihe ọzọ ọkachamara.
Na mgbakwunye na onyinye pụrụ iche, nke na-ezo aka na ụdị egwuregwu kachasị elu (nke m ga-ekwu maka obere oge), isi ihe bụ iru ihe mgbaru ọsọ Xbox Live
Ee, ị gụrụ ya ziri ezi! Enwere ike igwu Minefield na consoles Microsoft, mana ị nwere ike irite isi na akaụntụ Xbox Live gị! Ugbu a, Otú ọ dị, ikwu okwu zuru ezu: oge ​​eruola ka ị ghọta otu esi etinye Minesweeper na kọmputa gị.
Ndị ọzọ na Minesweeper
Ugbu a, m ga-akọwa ụfọdụ Nhọrọ ndị ọzọ na-egwu ala ịhọrọ ma ọ bụrụ na afọ ojuju na Microsoft Minesweeper adịghị.
Minesweeper: Ihe ndị dị mkpa (Windows XNUMX)
Nhọrọ mbu mbu m choro bu Minefield: ihe dị mkpa, ihe omume n'efu nke ị nwere ike ịchọta na ụlọ ọrụ gọọmentị Windows XNUMX na ị nwere ike iwunye site na ịpị bọtịnụ ahụ nweta. Onweghi ntinye tinye ma obu mgbasa ozi n’egwuregwu niile. Kaosinadị, usoro Adventure na-efu. Ọ bụ ahịhịa ọdịnala ọdịnala nwere ọkwa atọ dị mgbagwoju anya na otu agbanwere.
The akụkụ nke grids na ọnụ ọgụgụ nke mines kwa larịị bụ ihe ziri ezi, Ya mere, dị ka Microsoft Minefield. Nhazi nke grid na-enyekwa otu ụkpụrụ ahụ: aha gbanwere, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ebe a ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ọnọdụ mfe, mgbasa ozi ma ọ bụ ihe ọzọ siri ike. n'ime nhọrọ Ga-ahụ 3 gburugburu iji hazie eserese nke egwuregwu na njikwa ụfọdụ metụtara oge, ụda na akara ajụjụ a na-ajụkarị. Ọ dị oké mkpa n'ezie dị ka isi okwu na-ekwe nkwa.
Ebe a na-egwu egwu egwu na-enye sistemụ nke onuogugu na akara a rụzuru na egwuregwu ahụ, mana ịnweghị ike ijikọ Xbox Live ịkọrọ ha ndị enyi: ọ bụrụ na ị chọrọ igwu Prato Fiorito, echeghị m na nke a nwere ike ịbụ nsogbu. Banyere ndị ọrụ egwuregwu, mmegharị ahụ yiri nke egwuregwu Microsoft: pịa ma ọ bụ mmetụ iji hapụ igbe ndị ahụ, pịa aka nri ma ọ bụ aka dị ogologo iji kaa ha. Dị Mfe, ọ bụghị ya otu a? Ihe eserese ahụ dịkwa ezigbo mma.
Minesweeper! (Windows iri)
Nhọrọ nke abuo m na-agwa gi, Minesweeper!Okwesiri maka ezigbo ulo ogwu. Ihe eserese ahụ abụghị nke kacha mma, mana egwuregwu ahụ na-emepụtakwa peculiarities nke mbụ maka Windows: mgbe niile na ọnọdụ niile ị nwere ike ịchọta ya na Storelọ Ahịa Microsoft.
Enwere grid 4 (mgbe niile na ọnọdụ niile kewara site na ọkwa nke mgbagwoju anya), ya bụ mfe, medio, siri ike y nro. N’ebe a enweghi ike ịhazigharị akụkụ ya na ọnụ ọgụgụ igbe a ga-ewepụta dị ezigbo iche na ụkpụrụ.
Na Mfe zuru oke, grid dị asatọ × itoolu n'ama ya na mines iri; n'etiti 10x12 na mines iri abụọ; na O siri ike iri na abụọ × iri na anọ na iri atọ na mines na na Nightmare iri na atọ × iri na ise na iri anọ na mines. Igwe ọrụ nke egwuregwu ahụ bụ elementrị: pịa ọ bụla ma ọ bụ mmetụ wepụtara igbe dị mkpa, na-enweghị ike ịlele ndị a na-enyo enyo. A sụgharịrị egwuregwu ahụ n'asụsụ Italian, ma na mwube I nwekwara ike ịgbanwe asụsụ ma ọ bụ ndabere nke mpio ahụ: iji nweta, pịa na akara ngosi ụlọ nke dị na etiti etiti.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, ị nwere ike igwu Minefield site na ịwụnye ngwa ngwa nke otu aha si Mac App Store, nke ị nwere ike iwunye site na ịpị bọtịnụ ahụ Nweta / Wụnye, nke dị n'akụkụ aka nri elu ma na-enyocha onwe ya, ọ bụrụ na ọ dị mkpa paswọọdụ Apple ID ma ọ bụ Aka Nkata (ọ bụrụ na Mac gị nwere akara mkpisiaka).
Egwuregwu ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka ebe a na-egwu egwu egwu, nke nwere usoro iri iri na iri na abụọ na iri abụọ. Iji dozie ntọala egwuregwu ahụ, ị ​​ga-pịa akara ngosi ụlọ dị na etiti etiti ma họrọ ihe kpatara ya mwube site na menu mepere emepe.
Etu esi egwu Minesweeper na ntanetị
Ingkpọ Minesweeper site na ịwụnye mmemme na kọmputa gị dị mfe, mana ị nwere ike ọ gaghị adị ka iwere ohere diski maka egwuregwu ahụ. Ya mere, gịnị ma ị kpọọ egwuregwu na ntanetị? Na weebụsaịtị enwere ọtụtụ saịtị na-enye gị ohere ịme ya: otu n'ime ha bụ Minesweeper n'ịntanetị nke nwekwara udiri ugwo na App Store. Ana m ebuli gị nke a n'ihi eziokwu ahụ na ọ nwere otu ihe eserese na njikwa dị ka ebe mbụ m na-egwu Windows.
Ebe a dị n’asụsụ Bekee, mana ịkwesighi ịma asụsụ ị ga-egwu. The grids nwere ọkọlọtọ akụkụ nke Microsoft Minesweeper: site na ịpị juego, nke dị n'elu aka ekpe, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti mmalite, n'etiti y ọkachamara, nke kwekọrọ na Mbido, Intermediate na Specialist. omenala bụ maka ọnọdụ eji emegharị ahụ zuru oke, ebe ị nwere ike ịtọ altura (Elu) obosara (Obosara) na kwa ogbunigwe (Nkem). Akara a ụdị na saịtị gị, gbanye akara ajụjụ.
Ndị na-arụ ọrụ egwuregwu ahụ na-ahụ aka ekpe aka ekpe iji hapụ mpaghara na ikike iji kaa ha: na ịpị njikwa lelee nchikota uzo mkpirisi igodo gi na mmeghari ya. Nhọrọ dị mma nlere anya nke ahụ ga - enyere gị aka ịkọwa ma ọ bụ mee ka okporo ụzọ dị narị pacenti abụọ ruo narị abụọ.
Ọnọdụ abalị kama, gbanwee ndabere nke ebe ahụ ma belata nchacha windo iji chekwaa ike n'abalị niile.
Agwaara m otu esi egwu Minefield na kọmputa na ntanetị, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya smart ekwentị ma ọ bụ ihe ọzọ mbadamba? Echegbula: enwere ọtụtụ ngwa egwu na - ahapụ gị ka ị kpọọ na gam akporo na iOS. Havefọdụ na-arụzigharị ụlọ mmanya!
Minesweeper: Onye nchịkọta (Android / iOS): mgbanwe nke ebe a na-egwu egwu egwu nke na-ewepụghị grids nke akụkụ na-abụghị akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ, gụnyere ọkwa na mkpokọta.
Globesweeper (Gam akporo / iOS) - ike gwụrụ nke Ogwe akụkụ abụọ? Iji ngwa a ị nwere ike igwu egwu na ngalaba na cubes. A mgbanwe nke Minefield kpam kpam maka ule.
Ofwa nke mines (Gam akporo / iOS) - gbochie mines na map nke mba ụwa site na iji mgbanwe a dị na ebe a na-egwu egwu na-akpọ gị ka ị nyochaa ọdịdị ala.
Etu esi wụnye Minefield na Windows 10
Amụtara m igwu egwu, oge erugo m ịkọwa Etu esi wụnye Minefield na Windows 10. Egwuregwu ahụ bụ n'efu na ụlọ ahịa sistemụ Microsoft, yabụ ihe ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ acha anụnụ anụnụ na ederede nweta na gọọmentị Microsoft Minesweeper.
Ngwa ahụ, dị ka ekwuru, bụ n'efu, mana enwere ọdịnaya akwụ ụgwọ nwere ike ịmeghe mgbe etinyere: ị nwere ike ịdenye aha na adịchaghị ndenye aha maka otu ọnwa na otu narị euro iri anọ na itoolu ma ọ bụ maka otu afọ na itoolu.89 euro. O di nwute, egwuregwu ahụ nwere ọkọlọtọ ma na-amanye gị ka ị lelee vidiyo nkwado nke sekọnd ole na ole ị gaghị ehichapụ. Nanị ihe ị ga - eme iji gafere bụ ịdenye aha. Uru ndenye aha ndị ọzọ bụ mkpụrụ ego inyeaka (nke bụ maka nsogbu) yana naanị ihe maka ọnọdụ Adventure zuru oke.
Mgbe anyị kwusịrị nke ahụ, ka anyị mee ihe! Mbudata zuru ezu, bido Microsoft Minesweeper site na akara ngosi ya na menu mmalite ma malite egwuregwu na Omuma ụdị ma ọ bụ na Ọnọdụ njem, wee pịa igbe ndị dị mkpa na ọkwa dị mgbagwoju anya: mmalite, n'etiti ma ọ bụ ihe ọzọ ọkachamara.
Isi windo Minefield, nke enwere ike ịgbasa na ihuenyo zuru oke site na akara ngosi ya na akụ 2 dị na aka nri aka elu, pịgharịa gaa na ntanetị: site na ịpịgharịa ya n'akụkụ aka ekpe, ị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ banyere egwuregwu na ihe mgbaru ọsọ Xbox Live. Can nwere ike ịkwaga isiokwu naanị na ụdị akwụ ụgwọ dị elu: n'ụdị nke bụ naanị otu ndabara na-egosi.
Otú ọ dị, iji nweta nhazi nke ebe a na-egwuputa ihe, ị ga-pịa akara ngosi dị na elu aka ekpe ma họrọ ihe kpatara ya mwube site na menu nke enyere gị aka: nke a ga-emepe ogwe akụkụ nke ị ga-esi edozi ya egwuregwu nhọrọ.
Nwere ike idozi olu ma rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ ịdọ aka na ntị, ebe ị nwere ike ịhọrọ ozugbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ma ọ bụ akara ajuju. Ọ bụrụ na kọmputa gị na-ahapụ ya, ị nwekwara ike ịgbanwe aka na eserese ma ị nwere ike ịgbalite mgbanwe nke ngwa ngwa mode na / ma ọ bụ iwu chụpụrụ. N'ikpeazụ, ị nwere ike họrọ iweghachi ntọala ntọala ndabara ma ọ bụ ihe ọzọ tọgharịa ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu.
Akụkụ ikpeazụ m ga-achọ ị attentiona ntị na ya. Xbox Live- Ọ bụrụ na ị debanyere aha profaịlụ n'ihi na ị nwere ihe njikwa Xbox, ịkwesighi ime ihe ọ bụla na mgbe ị ruru njedebe, a ga-amara gị ọkwa na desktọọpụ. Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ, anaghị m enye gị ndụmọdụ ka ị denye aha ya n'ihi na a gaghị akwụghachi ya ụgwọ.